Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1) hplc =98% | I-powder ye-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Testosterone powder Series / Oxymetholone (Anadrol) powder
2.75 koku 5 ngokusekelwe ku 4 izilinganiso ikhasimende
SKU: 434-07-1. Categories: I-Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu ukuya ku-Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Oxymetholone (Anadrol) powder kutholakala ukusetshenziswa kwalo ezivamile phakathi abasubathi nomzimba abakhi imiphumela eminingi inikeza ukufukula testosterone Izithako. Ukugcina isisindo, Anadrol powder kwakucatshangwa njengomfazi izidakamizwa isisindo somzimba. Ngaphezu kwalokho ekukhuphuleni esesuthi, futhi wasiza yokuthola amandla kanye abomvu egazi count.
I-Oxymetholone (Anadrol) ividiyo ye-powder
I-Oxymetholone (Anadrol) ewutshani omuncu Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C21H32O3
I-Melt Point: I-172-180 ° C
Ukusetshenziswa kwe-Oxymetholone (Anadrol) emifushane emjikelezweni we-steroids
I-Oxymetholone powder nayo ibizwa ngokuthi i-Anadrol powder, i-A-bhomu ne-A50.
Ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwe-Oxymetholone powder
Ukwengeza u-Anadrol powder ku-50 mg / usuku luka-Dianabol unikeza inzuzo encane eyengeziwe emjikelezweni we-steroid; Ngokuphambene, ukwengeza u-Anadrol powder ku-50-100 mg / day trenbolone acetate noma i-60-80 mg / usuku u-Anavar (i-oxandrolone) inikeza ngcono kakhulu.
Ukusetshenziswa okujwayelekile yi-50-150 mg / ngosuku. Kwesinye isikhathi izidakamizwa ezinkulu ezinjenge-300 mg / ngosuku zisetshenzisiwe, kepha uma zifakwa kahle nge-one or more steroids, zivame ukuzuza kancane ngokudlula i-150 mg / ngosuku.
Isexwayiso ku-Oxymetholone ewusizo
Imiphumela ye-Anadrol powder nayo iyohamba kancane kancane ngemva kokusetshenziswa. Kungani ukhathazeka ngalesi sidakamizwa uma imiphumela izohamba kancane kancane? Yebo, i-Anadrol powder iyinhle njengokukhushulwa okwesikhashana ukuthuthukisa ikhono lakho ngenkathi ulinde ezinye izinto ezikhuthazayo zokukhahlela. Ikuthenga isikhathi futhi ikuvumela ukuba uqale umsebenzi wakho ku-100%, esikhundleni sokuchitha amasonto noma izinyanga kancane ukungena kuwo.
Imiphumela ye-Anadrol powder ingahluka kusuka komunye nomuntu, kepha ngokuvamile ilandele indlela elandelayo. Uzobona izinzuzo ezinhle kakhulu ezinyangeni zokuqala ze-3 zokusebenzisa okungeziwe. Imiphumela iyovame ukuphuma emuva emva kwalokho. Ukuze unciphise amathuba okuba nemiphumela emibi, cabanga ngokucophelela ukulinganisa umthamo wakho ngaphandle.
Ukumaketha okumnyama oku-Oxymetholone powder
Indlela yokuthenga i-Oxymetholone powder; Thenga i-Anadrol powder kusuka ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubungcweti 98% Oxandrolone / Anavar eluhlaza okwesibhakabhaka kumalungu omzimba noma amalebhu angaphansi komhlaba ukusetshenziswa komlomo.
Raw Anadrol powder Ungadliwa: